Ukuxhomekeka kwezakhiwo ezixhamlayo zemveliso kumbala wazo
Siyazi ixesha elide ukuba ukutya okutshatyalaliswayo kukutya kuphela, izithelo, imifuno kunye nemifuno kufuneka kubekho ekudleni. Yaye indlela yokufumanisa ukuba luncedo kangakanani, ukuba awuyiyo ingcali kwondlo?
Ngokuqinisekileyo nayiphi na isiqhamo, ukuba sisandul 'ukutsala, sinomtsalane nobuhle bayo, kodwa yintoni ekufuneka ikhethwe ukuba ayiyikuzonwabisa kuphela nephunga layo kunye nokunandipha okumangalisayo, kodwa nokufumana uncedo oluphezulu lwezempilo? Indlela elula kakhulu kwaye elula - thobela umbala. Umbala obonisa ukuba luncedo lolu okanye loo mveliso, kwaye zeziphi iingxaki zempilo ezinokusombululwa ngoncedo lwemveliso.
Imveliso ye-Orange kunye nobomvu
Umbala obaluleke kakhulu ubomvu, awusebenzisanga iinkqubo zengqondo kuphela, kodwa eziphilayo. Ngokuphindaphindiweyo ngamnye wethu weva ukuba abantu abakhetha ukhetho obomvu yienkokheli, kwaye kwindalo enjalo inkokheli ibhetro-carotene, emzimbeni wethu uphinde waveliswa njenge-vitamin A.
I-Vitamin A inenani elininzi leenzuzo, kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu yi-antioxidant. Zithintela ukubunjwa kweeseli zomhlaza, isekela imithwalo yegazi, umbono kwaye iphucise inkqubo yokuguga. I-Beta-carotene ibeka imifuno kwi-orange kunobomvu, kodwa umzekelo, ngamanye amaxesha izaqathe zibomvu, ezibonisa umxholo ophezulu we-beta-carotene kuwo. Umbala oluhlaza obomvu unomlambo, ithanga, kunye nombala ukhanyisa kwaye ugcwele ngokugcwele, umlinganiselo omkhulu we-carotene.
Nsuku zonke, kukho amabini anamakhulu amabini anamanci amahlanu ama-gram e-steamed okanye aphekiweyo imifuno ukuze anelise imfuno yansuku zonke ye-beta-carotene. Ungadla imifuno eluhlaza, kodwa kungcono ngebhotela, ekubeni i-vitamin A i-soluble.
I-Lycopene i-antioxidant enamandla enika umbala obomvu. Oku, unokuthi, i-carotenoid, eneempawu ezinamandla kakhulu ze-anticancerogenic. Ukongezelela, kunciphisa umxholo womzimba we-cholesterol eyingozi kunye nokukhuthaza umsebenzi wentliziyo engcono. Kukho iitamatato, i-pepper ebomvu, ikhava, i-guava, iidipefruit, njl.
I-Flavonoids zizinto eziphilayo ezisebenzayo, ziquka i-anthocyanin, umbala womntu wendalo. Utshiza imifuno kunye neziqhamo ngemibala eyahlukileyo: obomvu, obomvu, obomvu, oononti, obomdaka. Utshintsho lombala luxhomekeke kwibhalansi ye-acid-base yemveliso. Iintlobo ezinobuninzi bama-alkali anthocyanates eluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nemveliso engahambelani nendawo-eluhlaza.
I-Anthocyan iyimfuneko kwingqondo yethu, inako ukuvuselela amandla okufunda nokuphucula imemori. Iqulethe ngokwaneleyo iziqhamo ezifana neziberberries, izidiliya ezimnyama, iiblueberries kunye neklabishi ebomvu. Ukuba ezi mveliso zomile okanye zityilisiwe, iimpawu zabo ezifanelekileyo azilahlekanga.
IBuraktozh ine-burgundy, i-lilac okanye i-violet umbala, ngokubulela ku-flavonoid phantsi kwegama elithi betanidine. Inceda umzimba ukuba uthathe i-vitamin E, uyakukhusela ekubhujisweni, inokumisela ukunyanzeliswa kwengcinezelo yegazi, ukuthintela izifo zentliziyo kunye neengculazi kunye neengcingo. Ukuba i-burak ikhulile kwindawo ezinobungcipheko ezingekho kwemichiza, ngoko iyakwazi ukususa isinyithi esinzima kunye nama-radionuclides oforganism. Amaqanda e-eggplants anesiphumo esifanayo, esicacile-violet. Ukuze kugcinwe i-betanidine efanelekileyo, imifuno kufuneka ibhakikwe kunokuba ifakwe okanye iphekwe.
Imifuno ephuzi kunye neziqhamo
Iintlobo ezinombala ophuzi, ziqulethe i-citron efanelekileyo, enemibala ye-lemon kumbala ophuzi. Inceda ukuqinisa iindonga zeempahla kunye ne-membrane yeseli, igcina imilinganiselo ye-enzymes efunekayo, ikhuthaza ukugaya kunye nokuphatha izifo zesisu esiswini. Iimveliso eziqulethe le nto ziquka iiapulo, iidiliya ezivuthiweyo, ingqolowa, i-melon, iitapile.
Kukulungele ukutya iziqhamo ezinjalo, kodwa ukuba oko akunakwenzeka, umzekelo, njengokuba kukho iifatata kunye nommbila - baphekele isibini, bhaka okanye ubilise.
Imveliso yombala oluhlaza
Izityalo eziluhlaza, ziqukethe i-chlorophyll eninzi. Isenzo saso siyimfuneko kwi-immune system, igazi, kunye nomsebenzi omhle wamathumbu nesisu, ukuqinisa amazinyo, amathambo. I-Chlorophyll inceda ukususa i-toxins evela emzimbeni, iphilisa amanxeba, iyasikhusela kwiibhaktheriya, eziza kugcina inyama kwi tonus yayo.
Imifuno kunye neziqhamo kufuneka zidliwe eziluhlaza okanye ngokunyanga okutshisa ukushisa. Ukutya okuhlaza kukupinashi, i-broccoli, i-dill, imifuno eluhlaza, i-parsley.
I-Kromeni iyanceda gqitha kwaye iya kuba yimifuno, njengeembotyi, iilentile kunye neeperesi, ingakumbi ukuba zinemibala emnyama, kunye nezinye izinto zokutya. Ngokomzekelo, izazinzulu zaseMelika ziye zenza into enomdla kakhulu. Kwakuquka ukuba iimbotyi ezincinci ezibomvu ziqulethe izinto ezininzi zokulwa ne-antioxidants kunezinye iintlobo nezinye izityalo zemifuno. Imifuno kunye nezityalo ziquka i-fiber fiber eyanceda ukunciphisa izinga le-cholesterol egazini lethu, kunye negalelo ekuthinteleni ukuxinzelela kwegazi.
Kukho imifuno kunye neziqhamo ezizityebi kakhulu kwi-acid e-unsaturated fatty acids. Lo ngumnquma kunye ne-avocado. Ziqukethe i-multivitamin D kunye namafutha enempilo. Ngombulelo, banceda ukugcina impilo yeenwele, izipikili kunye nolusu kunye negalelo ekugqithiseni i-carotenoids ngumzimba.
I-acid acids nayo izaliswe ngeentlanzi ezithile. Umzekelo, ityhuna, i-herring, i-sardine, i-salmon. Iqulethe i-Omega 3 i-acids ekhusela iiseli zethu. Ukuba uhlala unondla intlanzi enjalo, iipropati ezixhamliweyo ezikuyo ziya kuxhasa umsebenzi wengqondo kwaye zikuncede ukuphelisa uxinzelelo, kwaye ziyakuthintela ukudandatheka.
Imveliso yobisi kunye nobisi ngokwawo mhlophe, zincedo kakhulu kwaye ziyimfuneko. Zinceda ukuqinisa imisipha kunye namathambo esifuba. Abantu abadala akufanele basebenzise ubisi, i-ajar, i-cream, i-kefir ne-yogurt, ushizi, ukhilimu omuncu. Ubisi lungcono kubantwana abancinci.
Ukwazi olu lwazi, unokuyihlolisisa ukutya kwakho kwaye ufake kuyo imifuno kunye neziqhamo ezizisa inzuzo enkulu! Emva kwakho konke, ukubeka iliso impilo yakho ngoncedo lokutya kwendalo kunye nendalo!
Iipropati ezisebenzayo ze-artichoke
Iklabishi kohlrabi: ukubunjwa, iinzuzo kunye neepropati
Iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo somdla
I-cinnamon kunye ne-vanilla: izakhiwo ezixhamlayo
Isondlo esifanelekileyo ukusuka kwindawo yokujonga oogqirha
Izakhiwo ezisetyenziswayo zokutya: i-hare, i-oats, i-corn, i-millet, ilayisi, i-buckwheat
Ukukrazula emlonyeni ngomphupha
Thatha othandekayo emva kokuhlambalaza
Uhlobo lomntu - i-fatale yomfazi
Iimbangela zokutshatyalaliswa kwesisu kwintombazana
Abafazi abadala balala njani namakhwenkwe?
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli yama-wort yaseYt. John
Yiba yinto engaqhelekanga kunye neqoqo elitsha lempahla yabasetyhini esuka eBizzarro
Yakha umoya wothando ngaphakathi kwindlu
Ubomi kunye nendoda engathandekiyo
Ngenyanga emva kokukhulelwa okukhuni
Indlela yokwenza intle eninzi ekhethiweyo ebusika: imithetho emithathu ebalulekileyo!
Ukwazi njani umlingiswa wakho ngombala weenwele zakho
Ubudlelwane phakathi kwabazali kunye nentsha